Ungamlibala njani umntu ongakuthandiyo | Amadoda aseStylish
Umlibala njani umntu ongakuthandiyo
Asifani kwaye asifani siziva ngendlela efanayo, Ngoko xa ujongene nokwahlukana okanye indlela yokuzama ukulibala umntu kunokubiza ngaphezulu okanye ngaphantsi. Ukuba ufuna ntoni umlibale umntu ukuba akakuthandi, akukho fomula eyimfihlo ukukwazi ukuyenza, kodwa uthotho lweengcebiso onokuzisebenzisa ngokuxhomekeke kubuntu bakho.
Xa kukho umntu oshiye uphawu ebomini bakho kwaye kufuneka uqhawule ngenxa yaso nasiphi na isizathu, kuya kuxabisa ukuba ulibale kwaye qala enye indlela yokuphila. Ukwenza oku, sihlalutya ukuba yeyiphi enokuba lolona nyango lulungileyo kunye nendlela yokulawula ngokugqibeleleyo olo thando lungathandekiyo.
1 Kutheni ndingalibalanga ngalomntu?
2 Musa ukuyigcina ngaphakathi indlela ombi ngayo
3 Yamkele imeko
4 Nqamula kuyo yonke into enxulumene naloo mntu
5 Sukuphulukana nendlela yakho kwaye uzifumane
6 Yomeleza 'umntu wangaphakathi'
Kutheni ndingalibalanga ngalomntu?
Ibhondi kunye nokuncamathisela zezona zizathu lonto yenza kubenzima kuwe ukulibala ngalomntu. Ukuthandana ngomnye unobangela kunye neyona nto iphambili kuzo zonke. Xa siziva sithandwa siba ngabantu abonwabileyo yaye sinokumenzela izinto esingenakuzicingela.
Ukuba sichithe ixesha elininzi kunye naloo mntu, kwakhona iya kuba yenye into eyongezayo. Asinakulibala ngokulula ukuba besisoloko sicinga ngaye yaye uninzi lweengcinga zethu bezibhekiswa kuye. Ukuba awukho ngoku uya kuziva ulilolo kwaye siya kuziva sididekile.
Ikhonkco kunye ephile ixesha elininzi ngokufanayo kwenza kube nzima ukulibala. Zininzi izinto ekwabelwana ngazo ngokufanayo, kwaye kwabakho unxibelelwano olukhethekileyo kwaye oko kwasenza saziva sonwabe kakhulu.
Musa ukuyigcina ngaphakathi indlela ombi ngayo
Ukuba oku kuye kwaba yingxaki enkulu sukuyigcina, yinto yengqondo ongenakukwazi ukuyigcina. Mhlawumbi sele ibe yinto ofuna ukuyigcina kuba ucinga ukuba kulihlazo ukuyixela okanye ukungayithethi. Kodwa kufuneka uyikholelwe loo nto yiqonde kwaye uyiyeke iya kukunceda kakhulu.
Ukuthi abasakuthandi asiyonyani onokuthi ubenentloni ngayo. Kufuneka unyaniseke kwinto oyivayo kwaye uthi kubonakala kukunganyaniseki ukuba abasakuthandi. Cela uncedo kubantu obathembileyo, kubahlobo bakho bokwenene okanye kwintsapho yakho. Ukuba ufuna ukuyenza ngokomoya, ukucamngca kulungile kakhulu kwaye unokuziva ukhatshwa kwaye ukhululekile.
Kuba nzima ukulibala umntu xa iinkumbulo ziphazamisa intloko yakho kwaye impendulo yeemvakalelo iseyenye yothando ebusweni bezo nkumbulo. Kunzima ukuthatha inyathelo lendlela yokucinezela umntu, kodwa ukuba ngaxa lithile kufuneka ukwenze oko, kuya kufuneka kube ngokukhawuleza.
Khumbula loo mzuzu apho kwafikelelwa kwisigqibo sokuba olu lwalamano alusenakwenzeka, apho mhlawumbi wakuxelela ukuba kuphelile. Kufuneka ucinge ngokweenkcukacha ukuba oku kuphelile, nokuba kukuthuthumbisa, kodwa kufuneka uziqinisekise.
Nqamula kuyo yonke into enxulumene naloo mntu
Kuphela kwendlela yokuba iingcinga zakho zingakhubeki kuloo mntu. Ukuba uqinisekile ukuba ayisayi kuphinda ibuye, akunyanzelekanga ukuba uqhubeke uzingcungcuthekisa nokwazi inyathelo ngalinye elithathwayo ebomini. Zinike ixesha lakho elihle ndikukhathalele kwaye ndikunike ixabiso. Zama ukungadibani naye, okanye iiwebhsayithi zokuncokola zikuxelela into ayenzayo, ukuba uyayiphepha ngolo hlobo uya kukuphelisa ukubandezeleka. Ixesha lakho yimali kwaye ngoku kufuneka unikezele kuyo yigubungele ngamava amatsha.
Sukuphulukana nendlela yakho kwaye uzifumane
Musa ukuqhutywa lusizi kunye Yenza i-vibration ihlale iphezulu. Oku kubizwa ngokuba 'kukungalahleki' kwaye ngenxa yoko kufuneka gxila kakhulu kuwe. Khangela zonke iindlela kunye neendlela zakho konke onako ukudala inkohliso, intlalontle kunye nolonwabo. Akunyanzelekanga ukuba ijonge umntu ukuba ayenze, okanye kuxhomekeke nakubani na, kodwa ujonge izixhobo zakho kwaye uphinda wenze onke loo maxesha akwenza uzive wonwabile.
Kukho abantu abafuna ukuphuma kwindlela yabo yokuphila kwaye bathathe uhambo olukhulu okanye batshintshe izixeko. Inqaku kukufumana eyona ndlela ilungileyo yokuzifumana kwakhona, ukuzixabisa kwakhona kwaye utshaye yonke into eyenzekileyo ngeyona ntlungu incinci.
Yomeleza 'umntu wangaphakathi'
Oku kuthetha kwi 'kholelwa kuwe'. Kuya kufuneka usebenze kwisidima sakho, ukunika ixabiso kwaye ndikuthande. Kuya kufuneka ukhale, ukhabe, uzive unomsindo kwaye uphelelwe lithemba, kodwa ayiyi kufana yonke imihla. Lila konke okusemandleni akho kwitshaneli kwaye uya kubona ukuba zihamba njani iintsuku kwaye ukukhanya kungena ngaphakathi kuwe kwakhona.
Kufuneka uphindaphinde ngokuphindaphindiweyo "Andiyifanelanga lento", "Uandizuhlupheka" kwaye uya kuziva ukuba kancinci kancinci uya kuziva ungcono kakhulu. Ngokuhamba kwexesha, amakhonkco amatsha ebomini bakho awasayi kuphinda akuvumele ukuba ucinge ngaloo mntu kwaye nokuba ucinga ngabo, ezo mvakalelo ziya kuba ziphelile. Kufuneka uzinike ixesha, uzithande kakhulu kwaye ujikeleze kunye nabantu obathandayo.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Amadoda aQinisekileyo » Kufanelekile » Isibini kunye nokwabelana ngesondo » Umlibala njani umntu ongakuthandiyo
Iindidi zamaqhina okubopha
Imibono yezipho ezili-10 zabasetyhini ngeKrisimesi ka-2021